gooni's Content - Page 3 - Somali Forum - Somalia Online
When a woman cries, disgrace is attached to a man
Gabadhu waa xusbiga kulmiye sida ay sheegayso, waliba Europe ugusoo dhaxamootay aqoonsi doon dartiis, gaar ahaan ku xigeenka garabka u fadhiya Sweden. Mujaahid yaa ka dhintay mid kalena haday u dhexdaa ama xaaskiisa tahay. Intaas oo titles ah iyo dhaqankii suubanaa labadaba way ku baxsan wayday. Waa hablihii soomaaliyeed oo dhabankooda labeenta laga tiri jiray waxa snm sidaa u bahdilayso. Si kastaba, xayraanku mar hore yuu soo bilawday wax cusub ma'ahan. Hadaad aragto dumar jir-dilkooda ookiyaale ku qarinaya saxaafadana ka xushoonaya. Ama ciyaal shaati buluug ah kala dhuumanaya, goobihii kubada lagu ciyaari jiray. Aqoonsi laga doono dal aan la aqoonsan. Xaalka snm ma fiicna hadaan aragti qiyaasay, waa gaba-gabo.
Dhoolacadeyn to gafuurtaagid
Reer bariga arimahooda lamasii baar baaro waa miro barde oo kale saaxiib.
Jubbaland governor Ahmed Madoobe meets with General Morgan
Taariikhdu waa sadex aragtidayda Mid fog oo dadkii joogay aysan qofna ka noolayn, ama maqal ahaan laysaga dhaxlay. Mid dhexe oo dadkii joogay wax laga heli karo iyo qoraaladoodii. Mid dambe oo inteena badan aan joognay, marka laga reebo ciyaalkan hada ilkaha cusub usoo baxeen. Mushkiladda snm, mushkilad fudud ma'ahan sida dad badan qabaan. Waxay ku wajahantahay dhinac kasta taariikhda, kala fogaynta, dhaqanka iyo suugaanta iwm. Hadii aad dhagaysato markay ka hadlayaan, waxay maah-maah iyo xigmad ka doonaan beeshooda qudha. Salaan carrabey wuxuu yidhi Xasan ganey wuxuu yidhi Heestii mujaahid mooge ee cabdi qays waxaa ku jidhay iwm, lagama yaabo inay xeradooda dhaafaan. Culumadoodu waa mujaahid Fanaankoodu waa cod macaane. Abwaankoodu caadi ma'ahan Aqoonyahankoodu waa PhD iyo wixii ka koreeya. Dhinaca dagaalada waligood lagama guulaysan hadana oohintoodu waa raganimo. Morgan waxay ku sheegaan inay kabihii uu ka cararay wali hayaan, hadana sawirkiisa lama tusi karo. Mudanayaal Morgan wakhtigiisii layskuma hayo inuu ciyaal-zio ahaa liido iyo 54 night club looma ogolayn (take away) qudha yaa loo ogolaa. Guriga uu ku qayilo hargaysuu ku yaalay waana kan iminka ay snm ku shirto. Mooge snm yaa u bixisay taariikh aan fogayn markay arkeen asagoo iska gunti furan dagaaladii sokeeye. Gaalada been u sheega laakiin soomaali is taqaan beenta ka daaya walaalayaal.
Gafuur taagga, meeshuu ku bartay waa la yaqaan. Balse dabeecad xumada meel fog buu kala yimid.
gooni replied to Tillamook's topic in Politics
Baarlamaan dhexe looma baahna hadii shirkooda wax kasoo baxo ama ay wax un ku heshiiyaan. Waa in mushaarka xildhibaabada dugsiyo quraan iyo mid maadi ah loogu dhisaa caruurta dayacan. Mar kastoo doorasho la gaarana shanta madaxweyne laysu keenaa si ay u doortaan kan shanaad oo xamar joogi doona afarta sano ee soo socota. Sharci dejin gobolada matala hadana aan qiimo lahayn waa wax ceeb ku ah dawladnimada soomaaliya. xataa masuulkii ka dhinta waa in lagu duubaa calan ay gaar u samaysteen oo ka qiimo badnaaday kii aan kor u fiirin jirnay oo buluugga ahaa. Mar hadaan dastuur ka dhaxayn, calan ka dhaxayn, ciidan ka dhaxayn, canshuur ka dhaxayn, wax barasho ka dhaxayn. Maxay hantida qaranka ugu cayaarayaan oo diyaaradaha bajaaj uga dhigayaan?
Masar waa dawlad soo jireena waxay xiriir la lahayd soomaaliya 7000 sano. Sodonkii sano oo soomaaliya burburka ku jirtay maslaxadeedu marnaba ugama muuqan soomaaliya. Waa safaaradda kaliya oo aan muqdisho ka bixin burburkii inkastoo maqlay in ganacsi madaw ku hoos jiray. Maanta dhaqaale nafteeda ku filan ma hayso, iska daa mid ay maslaxad ku doontee. Batroolka laga isticmaalo masar waxaa qaaraan ku siiya dawlaha khaliijka oo xulufada dhaw la ah nin la quudiyo lagama quuto. Ethiopia waa dal qowmiyado kala duwan ka kooban laakiin ogol inay dal qudha ahaadaan wax kastoo ka dhaxeeya ilaashada amnigooda qowmiga. Soomaaliya waa dal qowmiyad qudha ah. laakiin, aan ogolayn inay dal qudha ahaadaan. Khatarta snm meeshaas bay ku jirtaa, darisku adoo hurda habeenkii gurigaaga dab waa ku tuuri karaa dabdamisna soomaaliyoo dhan lagama helo.
gooni replied to Mastermind's topic in Politics
Odweyne Saaxiib is bar-bar dhig gobalada soomaaliya ma'ahan mowduucu Cabashada dadkuna wax wayn ma'ahan ayaduna markaad sii fiiriso, waa shacab aan ogayn waxa lakala macaashayo. Casaabada meesha gaysay carabka qudhoodu waxaa ugu dambaysay maalinkii ay geeyeen buurta waa sadex sano iyo siyaado. Maxaa buurta ku jira marka hore waa shaqo aqoonyahan Maxaa dadka locals ah qofna looga shaqo gayn waayay waa su'aasha ugu wayn mowduuca. Waa arrinta snm dawladda federaalka soomaaliya kula colowday waana dhawrista hantida ma guurtada ah ee alle ku manaystay dalka soomaaliyeed. Hadaanan caqli aan leenahay kulasoo bixi kari waynay macnaheedu ma'ahan inaan mijin jaada siisano. Aqoonyahan markaad tahay kala saar rag iska celinta sokeeye iyo dayaca afmariskaa oo snm ku xaraashayso hantidii jiilka soo socda oo wiilkaaga wiilkiisu owoow u noqon lahaa. Arrintu waa intaa walaale adigoon gabay iyo baraanbur isku dhex darin.
Allaha u naxariisto Nin dalkiisa iyo dadkiisa usoo kifaaxay buu ahaa.
لا حوله ولا قوة الا بالله Koonfurtu waa dad nool inay ayagu is dhacaan mooyee shisheeye ma dhici karo. Waqooyiga qaad baa gunti furay shacabkana waxay ku dhahaan nabadda ilaashada. Macdanta waxaa laga qodaa buurahooda kontenerka dhoofayana looma ogola inay furaan. Waa maamul koonfurta un u faana, hadana shisheeye u dulaysan
Aragtidayda Masar waxay ku jirtaa wakhti adag oo dhaqaale xumo iyo haybad la'aan isugu darsantay. Snm waxay u egtahay bahalkii dabka iftiinka moodi jiray oo markuu ku dhaco qaraxa khafiifkaa samayn jiray. Ethiopia, biyo xireenkeedu waa amni qowmi ay xaq u leedahay inay ka faa'iido nimcada dalkeeda. Masar waa u geeri aan nolol dambe lahayn, hadii biyuhu ka yaraadaan gacanka suways iyo beeraha dhulka saciid. Dadkeedu waa boqol malyan oo dhalinyaro u badan sidoo kale Ethiopia. Waa wax lagu qoslo in snm qadiyadda sidaa u adag ayadoo curdana oo habaw ah dhex istaagto. Khatarta Ethiopia uga imaan karta yaa ka halis badan sawirka ay masar la galayaan.
Mushkiladu garoon ciyaareed ma'ahan aragtidayda way ka wayn tahay. Noloshooda ma'aysan maqal wax ka badalan waxa maalin walba maqlaan ama arkaan oo ah dalab aqoonsi baa noo maqan. Buugay akhriyaan cuqdad baa ku qoran, xataa looma ogola. indhahoodu inay qabtaan colour buluug ah. Dhalinyaranimadu baqdin ma taqaan, waa ubax biyaha aan nadiifka ahayn ka dilindiloodo mar walbana qurxoon haday helaan jiho sax ah. Waxay rabaan inay arkaan dalkooda oo kumanaan km ah iyo kala duwaanaashaha qaab hadalka, ciyaaraha, dhulka, cimilada, labiska iwm. Inteena waa wayn waan kusoo raaxaysanay, ayagiina waan u diidanahay waa silsiladda ay rabaan inay jebiyaan goor aan fogayn.
Maxamed faatax raximulaah wuu ka iibsaday kaniisada asagoo awoodi karay inuusan iibsan, waxaana lagu tukanayay 500 sano. Muslinku ma ogola in meelaha cibaadada xoog laysaga saaro waa dulum laga digay. Sheekhaan wuxuu leeyahay matxaf yaa masaajid loo badelay ee kaniisad masjid looma badelin. Dhanka kale ilaa iyo hadda waxaa turkiga ku taal, ku dhawaad 400 ilaa 500 macbud oo aan waligood la taaban. Halka wixii taariikh iyo masaajid muslinku ku lahaa Europe aan waxba laga reebin wax kaniisad laga dhigay iyo qayb nightclub loo badelay. Wuxuu sheegay in dalalka carabtu ay kala saari waayaan arrimaha diinta iyo siyaasadda kala dhaxaysa Erdogan.
Tolmooge Galin dambe wali lama gaarin ha degdegin ina aabo Alxamdulilah hadii puntland farxad hadlayso, waa arrin noo wanaagsan khaas ahaan iyo guud ahaan. Baqdinta iigu wayn waxay iga haysay in puntland gooni u go'do oo aan kaligay agoon koriyo.
gooni replied to YaxaaS's topic in Politics
Puntland Dadka dil iyo waa cabsanaayeen laysugumo daro. Hadii la dhaho waa xag-jir sidii 2011 Way socon lahayd mudo kooban sababtoo ah beeshaan waxay u badan tahay salafi muctadil ah ama dhexdhexaad waa ganacsato dhaqan fiican meelna iskamasoo galaan maandooriye. Allaha qaboojiyo dadka dhiigooda yaan la banaysan si fudud.
Xaalku jiq ma'ahan beel daaje. Meel fiican buu wadanku marayaa sug cayaartu ha kululaatee.
Tolmooge Farmaajo boqorka Japan ma'ahan waa la badeli karaa. Farmaajo wuxuu kaliya oo ka hor yimid in garoowe layska ag fadhiyo malaayacni, oo hooyo aan irmaanayn ilmo aysan korin karin la ag seexiyo. Ayadoo la rabay inay jiifka kacdo oo sida isu dhaanto bay waxay tiri labo cunug oo kale yaan dhalay ee ha layla koriyo. Waxayna u bixiyay garoowe one iyo garoowe two, kii sadexaadna haday riman tahay. Hadii maxkamad dastuur la sameeyo ma u malaynaysaa in hooyadii federaalku u hogaansami doonto go'aanadeeda? Mise waa in shardi looga dhigaa inay xarunteedu qardho noqoto? Soo ma ogid in hadii codka laga helo xildhibaanada ku matala puntland federaalka dhexe ay ka hor imaanayso rabitaanka beesha iyo dastuurka garoowe yaala. Walaale Puntland sinaan waa ogol yihiin waa dad fiican. Sarayna waa ogolyihiin waa boqortooyo. Hoosayn ma ogolaan karaan. Waa xigmad aan ka helay aqoonyahan ku abtirsada puntland oo okiyaale tir-tiranayay. Waxaan ku iri walaale. Sinaan wax laguma xukumo,waa in kala dambay la helaa. Sarayna heli maysid, ilaa aad hoosayn ogolaato. Beesha caalamka arrinteeda dawladaan hada joogta waa soo af jartay ilaa xad. Aragtidayda puntland toosh sii damaya bay salka ka garaacayaan.
Gabaygu booskiisii mahaysto mudane.
Odweyne Clipka mujaahidiinta dhagayso adigoo mahadsan. Inta indhaha madaw koonfurta way habaaraan Inta ilkaha la'na koonfurta way caayaan Awoodda snm waligeed intaasay ahayd. I hope you agree with me. Usoo noqo mowduuca Mikiin Macruuf. Sheekh mukhtaar wuxuu ahaa nin fiican oo saalax ah sidaan maqlay allaha u naxariisto. Carabtu waxay ku maa-maahdaa xanta wanaagsan waa qalimada ilaahay. Reer koonfurkuna waxay ku ducaystaan masagadii kal iyo mooye dhexdeeda ku barida allaha kaa dhigo. Golihii kacaanka arrintoodu waxay ahayd qooru ama 'qoodh' xero kuma heshiiso, in lakala baqo waa dimuquraadiyadda afrika. Kala dambayn la'aan ama kala baqid la'aan sodon sano oo khibrada bay soomaalidu haysaa. Hadii mahdi ama caydiid midkood samo diidow loo qaadi lahaa, waxaa ka dambayn lahaa nolo wanaagsan. Sadex malyan oo dhimasho ah iyo sodon sanoo magac xuma ah ma dhacdeen.
Ilaahay aadanaha makala fadilin (ilaa bitaqwa) taqwada mooyee, mana fiiriyo muuqaalkooda sida xoogga, qabiilka, quruxda, maalka iwm. Wuxuu fiiriyaa quluubtooda iyo alle ka cabsigoodu intuu le'egyahay. Ninkaan iminka hadlaya, haduu balaayada asagu gacanta ku hayn lahaa waxba kama reebeen koonfurta. Allaha soo hadeeyo. Su'aashu waxay tahay waan tagay waqooyi xataa miyiga tuulo iyo meel kasta wali kuma arag dad sidaa u calool xun, karam,deeq iyo dhaqanba waan ku arkay. Miyay qarsadaan oo xasuustaa ka lunta markay microphone soo hor istaagaan? Ma inta saxaafadda la hadashaa mise waa dhamaantood? Maxaa u diiday samirka mowtida Iyo inay ilaahay xisaabtiisa, ay faraha kala baxaan? Ma jilicsan yihiin oo qalbiga dumarkaa ku jira? Ma aqoosigaa ku xiran in aysan xumaantu joogsan oo waa heshiis hoose oo aan la ogaan karin. Ma sheekadii alif layl wa laylbaa oo gabadha carbeed baryaha ku noolayd? Waa su'aalo aysan cid walba ka jawaabi karin (الى من رحم ربى ) Dagaal soomaaliya ka dhaca kii ugu fududaa yaa ka dhacay waqooyiga waa xaqiiq warkaygu. Gaajo ma lahayn, cudur ma lahayn kufsi ma lahayn biyo la'aan ma jirin walaalahood Ethiopia yaa wax walba l garab taagnaa si ay gurigooda u gubaan. I have no idea what so ever, almost three decades what's called this disease in eglish?
gooni replied to Khadafi's topic in Politics
Ra'yigayga Doorashada waxaa fiican inay wakhtigeeda ku dhacdo,gees lo'aad kulaylkaa lagu gooyaa. Farmaajo waxaa la tartami kara dawladiisa oo kii soo baxaba anfac laga heli karo. Ma qabo madasha xisbiyadu inay doorasho kusoo bixi karaan toos iyo mid dadban labadaba Waxaa dhici karta sababta madasha xusbiyada, puntland, iyo jubaland fadhiga u diideen ama soo jeedku ugu batay ay tahay balan qaad carbeed oo kusii tiirsan midawga yurub oo dhinac turkiga ka diidan.
Cadnaan. Meel fiican baad ka timid caqligana allaha kuu barakeeyo. Ma jiro qof, qof kale u jawaabi kara asagoon aqoon beeshiisa. Aragtidaada shakhsiga ah, qofna kama jawaabi karo si toos ah, waxay u aadayaan beesha ay kugu malaynayaan inaad kasoo jeedo. Waa iska caadi dhaqan ahaan laakiin sidaad sheegtay cayda mutaxan waa laga fiican yahay, sababtoo dadku waa rixim iyo casabo ama adeer iyo abti. Waxaa laga yaabaa inaad wiilkaaga hooyadii caydo ama gabadha aad dhashay wiilkeeda ama abtigaa hooyadiis soomaalidu waa dun isku fur-furatay. Hadii xaal ku qabto dhawr jeer waxaa xumaanaya qiimaha hadalkaaga sida oodweyne oo kale. Snm inta ka joogta SOL akhyaar bay u badan yihiin xoogaa cuqdad ah waa isaga jirtaa, ayadana allaha ka saaro. Marmar waa laga xanaajiyaa adigoo iska ilaalinaya dhaqanka hadalka, lama wado fiicnaado si aysan u dhihin kursi waan ka maaranay.
Aragtidayda, waa un aragti, siyaasad shaqo kuma lihi, sidaa darteed ii ogolaada inaan idin la wadaago adinkoo mahadsan. Waxay ila tahay in snm sii habawday intii hore in kasii badan. Sodon sano ka dib haday Taiwan iyo Gambia xaalkoodu joogo dad soo dhaw ma'ahan. Rajo fiican yaa u muuqan karta dadka aragtida dheer leh oo midnimada jecel, wayna iskasoo noqon ayagoo daal badan ka muuqdo aakhirka hadaan alle oofsan. Falanqeeyaha siyaasadda waxaa wax laga waydiiyaa odoros oo ah waxa imaan kara. Waa shaqadiisa maalin laha ah inuu odoroso waxa soo socda asagoo ka qiyaas qaadanaya waxa jooga iyo wixii lasoo maray. Asal ahaan erayga "odoros" waa malo rumowda alle idankiis, waa hadii qof khibradeeda leh la waydiiyo. Tusaale Hadii nin waligiis miyi joogay la waydiiso hebolow roobkaas xagee ku aadan yahay, wuxuu kuu sheegi karaa inuu roobkaas dhawr meelood ku aadan yahay ama meel kaliya, asagoo kuu magacaabaya si fudud. Waxaad kale oo aad sii waydiin kartaa wakhtiga iyo inaad ka gaari karto meeshaad rabtay iyo in kale, waa markaad ka baqayso inuu dhex kugu helo roob xooggan. Siyaasaddu waa la mid aragtidayda. Snm siyaasad ahaan way gawracantahay lama garanayo cid gawracday runtii, taa macnaheedu ma ahan inay wali naf baxeen, naf baxa waxaa ka horeeya rafasho badan. Waxay raadinayaan geedkii nasashada ee ugu dambeeyay oo iminka u muuqda.
Timo cadde I am trying to save you honesly. Snm will never show you where is the green on this earth. This old man. he enjoyed his life already and he loses all his teeth in a marfish.do not fellow his footsteps, that will take you in a dark house writing front door (the past) Tell me did you ever been south, east and west somalia or they told you stay with mama, i mean your still young? Waryaa oodweyne wiilashu ayagoo adeerkood yaqaana bay yimaadeen meesha.uma baahna inaad dadka kusii dirto.